Ngokuvamile, izimo lapho olulodwa lwe-inthanethi kanyekanye esetshenziswa abantu amaningi. Ngokwesibonelo, ngokuvamile kuba njalo okwenzekayo lapho ukufinyelela ekhaya ngokuhlanganyela. Ngenxa yalokhu, ngezinye izikhathi kufanele abhekane umphumela yemvelo - inkinga isivinini ongaphakeme.
Ngo umkhuba kubukeka kanje. Ake sithi kukhona ama-computers amabili ngesikhathi esifanayo usebenzisa eyodwa uxhumano inethiwekhi global. Uma ungawenzi izinguquko algorithm we-router wendawo (uma ikhona), i-software noma yesistimu yokusebenza, cishe kanye nazo zonke izinsiza mahhala isiteshi uthola kukhompyutha eyodwa eyenza abantu baziqhathanise izicelo kanye / noma initializes kuqala. Ngamagama alula, uma umuntu ekhaya kuhilela ukulanda amafayela ngokusebenzisa iklayenti sesifufula, omunye umsebenzisi kungaba kakhulu ukwaneliswa ematheksthi futhi i-imeyili. Kodwa uma ufaka ukulawula traffic Inthanethi, bese le nkinga ingaxazululeka kalula. Futhi ngokushesha futhi kalula. Ngaphezu kwalokho, ukuqonda ukuthi ubeke umkhawulo ijubane Inthanethi, kungenzeka ukuba ahlele ukwabiwa lomthamo abasebenzisi abaningi, kuyilapho kulondolozwa kwi wesevisi yokukhokha. Yileyo indlela ulwazi kungayiletha inzuzo.
Ngakho, kukhona izindlela ezimbili ukulawulwa kwezimoto: software kanye hardware. Futhi wokuqala ngamaqembu amabili: esishunyekiwe yesistimu yokusebenza, futhi ngokusebenzisa zabama-third party. Kokubili lokuqala futhi indlela yesibili Nokho uvumele ukuze unciphise ijubane-Inthanethi, ifa inombolo yezici isici. Ngakho, ihadiwe cishe ezizimele kusukela amakhono yezamakhompyutha yezingxenye computer futhi bangasebenza ngempumelelo ngisho noma izinhlelo ezindala. Kodwa yesibili nezimo ngaphezulu ukucushwa futhi ayibizi kakhulu (nakuba akusiyo umthetho). Kukhethwa incike izidingo yomsebenzisi, ikhono ukusebenza kumadivayisi / izinhlelo namandla nethuba lemali eningi. By the way, accounting traffic Inthanethi kalula kushintshwe ezimweni zombili.
Ukuqalisa ke kuyodingeka idivayisi ekhethekile - umzila. Amanani ephansi ekupheleni onobuhle aqala ku- $ 10-15, okubenza babe i isiphakamiso ezithakazelisayo. Uma abantu kancane, kunengqondo ukubhalisa kukhompuyutha ngayinye IP-ikheli elihlukile. Ngemva yokuxhuma router kudingeka iya kuzilungiselelo zalo (ikheli isiphequluli is ebalulwe imiyalelo noma ilebula), futhi ohlwini khetha «DHCP - Ikheli Ukubhukha". Lapha udinga ukwengeza computer ngamunye, ecacisa Ikheli le-MAC eliyingqayizivele futhi IP (ingabonwa property le adapters inethiwekhi). Ngemuva ukuqalisa router, hlola «DHCP Client List" - wonke amakhompyutha kufanele sibonakale. Manje, ukuze kukhawulwe ijubane Internet-IP ikheli ngamunye, kubalulekile ukuba uqhubekele "Lawula ubungako bokudlulisa -. Uhlu imithetho" Lapha udinga ukwengeza ikheli futhi zibeka izinga eliphelele Umjovo futhi ukubuya.
It is ibuye Kunconywa ukuthi ulungiselele zokuhlunga MAC-ikheli kwimodi engenantambo kwesigaba, okuzokwenza ukuvikela uxhumano ekutholeni ngejubane ngokugcwele kunoma imuphi umsebenzisi, ngakolunye uhlangothi isihlonzi elibanzi ikhadi inethiwekhi.
Kulokhu, okuthandayo kufanele inikwe izinhlelo ezikhethekile (hhayi esakhelwe-Windows izixazululo ezifana QoS). Ungakwazi ukufaka i-proxy HandyCache zendawo ucacise ongu- ke. Ububi ukuthi une ukumisa inethiwekhi ukuze amanye amakhompyutha ifinyelelwa ngokusebenzisa olulodwa - umongo, lapho i-proxy. Libuye izinhlelo owaziwa kakhulu Traffic Shaper XP. It ikuvumela ukuba ubeke imingcele ngesivinini. Ngemva izilungiselelo kukhompuyutha ngayinye ungaqala ukusebenzisa ukuxhumana olulodwa.
The best nokwenganye isofthiwe
Inkumbulo latency - kuyini?
Ukwakhiwa Economics: Kuyini lokhu?